lundi, 28 août 2017 20:56
Sahabe-Ambatondrazaka: Nodominy ny fiara, nodarohany ho faty avy eo ny mpamily
Lehilahy iray no namoy ny ainy vokatry ny herisetra nihatra taminy ny alin’ny zoma 25 aogositra lasa teo.
Nisy fahasimbana ny fiara nitondra fianakaviana iray nony teo Sahabe, tsy lavitry ny tetezana, amin’ny RN44, ny andro anefa maizina. Rehefa variana nanamboatra teo dia nisy kubota nipoitra avy any, ary nandona ilay fiara amboarina.
Nivoaka avy ao anaty fiara amboarina ity rangahy iray, kinanjo voadarok’ireo nitaingina kubota teo amin’ny hatony. Vao nahita izany ireo olona niaraka taminy dia niafina sy nanara-maso ireo nidaroka.
Voa mafy ilay rangahy ka voatery tsy maintsy nentina hiakatra any Antananarivo kinanjo vao teo Moramanga dia tsy tana ny ainy.
Nametraka fitoriana ao amin'ny Zandarimaria Ambatondrazaka ny fianakavian’ny maty androany.
lundi, 28 août 2017 20:53
Fiahiana ara-tsosialy: Manao fanentanana aty Sambava ny Cnaps
Mitafa amin’ireo solontenan’ny mpampiasa sy ny mpiasa eto Sambava ny Cnaps nanomboka androany, ary mandritra ny telo andro, hiresahana ny maha zava-dehibe ny fiahiana ara-tsosialy ary koa hanazavana ny andinindininy tsara ho fantatr’ireo mpampiasa ny amin’ny adidy izay tsy maintsy horaisin’izy ireo.
Nanipika mazava ny Talen’ny kabinetran’ny ministeran’ny Asam-panjakana sy ny fanaovaozana ny raharaham-panjakana, ny asa ary ny lalàna sosialy Atoa Avimanana teo ampanokafana ny fihaonana fa iankinanan'ny aim-pirenena ny fiahiana ara-tsosialy ka tsy tokony hatao tandrametaka ary tokony samy ahafantatra ny zony ny tsirairay.
lundi, 28 août 2017 08:44
Mahajanga: Niverina nisokatra ny orinasa Bidco
Nivaly ny fitakian'ireo mpiasa ao amin'ny orinasa mpamokatra menaka Bidco, eny Amparemahintsy-Mahajanga. Niverina nosokafan'ny fanjakana nanomboka ny faran'ny herinadro teo ity orinasa ity rehefa nakatona nandritra ny volana maromaro noho ny tsy fananana atontan-taratasy mazava ahafahany mamokatra sy mivarotra menaka.
Nisy ny fitokonana nataon'ireo mpiasa maherin'ny 150 tamin'izany nitakiana ny tokony hikaroham-bahaolana satria sahirana ireo mpiasa voatery niato tamin'ny asany.
Ho fanamarihana io fisokafana io ary dia nisy ny fanaovana ny joro araka ny fomba Sakalava teny an-toerana mba ho fanajana ny fomban-drazana sy ho fanomezana hasina ny mponina eny amin'ny Fokontany Amparemahintsy.
lundi, 28 août 2017 08:00
Fifaninanana nasionalin'ny fanatanjahan-tena an-tsekoly: Delegasiona mendrika indrindra Atsimo Andrefana
Ireo mpianatra avy any amin'ny faritra Atsimo Andrefan'ny Nosy no nitondra amboara be indrindra avy aty Mahajanga nandritra ny Sport scolaire national, notanterahina nandritra ny 10 andro ary nakatona tamin'ny fomba ofisialy ny harivan'ny alahady 27 aogositra 2017 tao amin'ny kianja Rabemananjara.
Na tamin'ireo taranja ho an'olon-tokana na ireo taranja iraisana, nisongadina hatrany ireo ankizy avy amin'iny faritra iny.
Toy izao ny famintinana ny vokatra azo ho an'ireo taranja niraisana: